अन्तत रवि लामिछानेले निकिता पाैडेलसँगै गरे विवाह, सामाजिक सञ्जालमा रविले के लेखेका छन् त ? – Online National Network
अन्तत रवि लामिछानेले निकिता पाैडेलसँगै गरे विवाह, सामाजिक सञ्जालमा रविले के लेखेका छन् त ?
७ माघ २०७५, सोमबार १६:४८
काठमाडौं, ७ माघ – अन्तत लोकप्रिय पत्रकार रवि लामिछानेले निकिता पौडेल सँग विवाह गरेका छन् । आज आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा सो कुराको जानकारी दिँदै लामिछाने आफुहरुले कानुनी विहे गरेको बताएका छन् । उनको केहि दिन पहिले पुर्व पत्नि सँग सम्धन्ध विक्षेद भएको थियो । विहे गरे पछि आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा रविले के लेखेका छन् त ?
ब्यक्तीगत जीवनले नयाँ मोड लिएको छ। एक अर्काका परिवार, आफन्त र नातागोताको छलफल र अनुमतिमा आज निकिता पौडेल जी र मैले कानुनी रुपमा काठमाडौं जील्ला आदालतमा बिवाहा दर्ता गरेका छौ। यो निर्णय यति छिटो गर्ने योजना नै थिएन।
तर हामी दुबै प्रती जसरी मानसिक यातना नै हुने गरि अनवरत समाचार र खोजबीन चल्यो त्यसले हामीलाई एक अर्काको निकै खाचो पर्यो। हामी समस्त दर्शक शुभ चिन्तक, परिवार इस्टमित्रहरु बाट एउटै मात्र कुरा चाहन्छौ, आशिर्वाद। परम्परागत रुपमा हामी आउदो बैशाखमा बिवाह गर्ने छौ। यो हाम्रो नितान्त ब्यक्तिगत जीवन हो। कसैको चर्चा, आलोचना, सुझाव, ब्याख्यामा हामी अटेनौ भने हामीलाई माफ गर्नु होला।
हाम्रो भोगाई र तपाईंको सोचाइ नमिल्न सक्छ। हामी दुबैजना यो निर्णयबाट एकदमै खुशी छौ। र हामी सबैबाट हाम्रो सुखद दाम्पत्य जीवनकालागि शुभ कामना मात्र चाहन्छौ।